Otu esi amalite ụlọ ọrụ na-aga nke ọma | Martech Zone
Otu esi amalite ụlọ ọrụ na-aga nke ọma
Sunday, June 28, 2009 Douglas Karr
N'afọ gara aga mụ na ụfọdụ ndị mmekọ na-arụ ọrụ na azụmahịa. Ibido azụmahịa abụrụla ọrụ kacha sie ike, nke dị oke ọnụ, ma na-eri oge m rụtụrụla. Enweela m mmekọrịta na ire ngwaahịa na mbụ, mana m na-ekwu maka ịmalite ụlọ ọrụ chọrọ ego, ndị ọrụ, ndị ahịa, wdg. Ọ bụghị ihe omume ntụrụndụ - ezigbo azụmahịa.
Akụkụ nke afọ gara aga na-arụ ọrụ na mpaghara ndị ọchụnta ego na-agba ahịa nke ha ma ọ bụ malite azụmaahịa nke aka ha. Enwere m obi ụtọ inwe ọtụtụ ndị enyi na gburugburu ndị ahụ. Enweela m mkparịta ụka nke obi na ọtụtụ n'ime ha - ha niile agbaala m ume iwere nfe ahụ.
Kedu otu esi amalite azụmaahịa na-aga nke ọma? Nweta ego? Mee ngwaahịa? Nweta akwụkwọ ikike azụmahịa gị? Nweta ọfịs?
Jụọ onye ọchụnta ego ọ bụla ị ga-enweta azịza dị iche. Offọdụ ndị ndụmọdụ anyị mere ka anyị nweta akwụkwọ ntinye aha ngwaahịa ma bido ịmalite ịzụlite ego. Nke a abụghị ihe dị ọnụ ala ịmalite azụmahịa! Anyị bidoro ụlọ ọrụ pere mpe ụgwọ na PPM, mana ala dara n'ahịa ahụ wee bulite ego na-aga n'ihu.
Kemgbe ahụ, anyị rụgoro ọrụ ngo iji kwado azụmaahịa ahụ n'onwe anyị. N’ịhụ azụ, echeghị m ma PPM ọ bụ nzọụkwụ mbụ ziri ezi. Anyị tiri ala na-agba ọsọ site na ikpo ego ego na enweghị prototype. Echere m na ọ bụrụ na m nwere ike ịgbanwe oge, anyị gaara achịkọta akụ anyị wee bido mmepe.
Ọ dị mfe karịa ịkọwa azụmaahịa gbara ngwaahịa na ihe atụ nke ngwaahịa a. Inweta ezigbo azụmaahịa bụ ezigbo echiche… ma ọ bụrụ na inwee karịa otu onye. Ọ bụrụ na ịmeghị, echeghị m na ịchọrọ ya ruo mgbe onye ahịa mbụ ahụ kụrụ. Banyere PPM (nke a bụ ngwugwu enyere ndị na-etinye ego), echegbula onwe gị maka nke ahụ ruo mgbe ị nwere onye itinye ego.
Atụmatụ azụmahịa? Imirikiti ndị ndụmọdụ anyị gwara anyị ka anyị nọrọ ọdụ na atụmatụ azụmaahịa ma rụọ ọrụ, kama nke ahụ, ịnwe nkọwa dị mkpirikpi ọnụ nke ezubere iche maka ndị na-etinye ego anyị. Nwee ọ whoụ na-enwe mmasị na ROI? Supee akụkọ ROI. Ọorụ na-enwe mmasị ịgbanwe ụwa? Kwuo maka otu ị ga - esi gbanwee ụwa. Were ọtụtụ mmadụ n'ọrụ? Kwuo banyere uto ọrụ nke ụlọ ọrụ gị ga-arụ.
Enweghị m nkụda mmụọ maka okporo ụzọ nke anyị jere, ekwenyeghị m na ọ bụ nke kachasị mma. Ndị ọchụnta ego nwere ụlọ ọrụ na-aga nke ọma n'okpuru eriri ha nwere oge dị mfe ịmalite ụlọ ọrụ ọzọ. Ndị na-etinye ego na-eme ihe niile na-eme gị niile na ndị ikpeazụ ị mere ọgaranya na-atụ anya ohere ọzọ ị ga - amalite.
Azịza dị mkpirikpi bụ na onye ọ bụla n'ime ndị m maara ama were ụzọ dị iche iche iji malite ụlọ ọrụ ha. Builtfọdụ wuru ngwaahịa na ndị ahịa bịara. Fọdụ binyere ego n’ụlọ akụ. Fọdụ gbazinyere ndị enyi na ndị ezinụlọ. Receivedfọdụ natara ego enyemaka. Fọdụ gara investors…
M na-eche kasị ụzọ nke na-amalite a ịga nke ọma ụlọ ọrụ bụ na-arụ ọrụ ala a ụzọ na ị na-ala na… na-arapara n'ahụ ya. Gbalịa ka ị ghara ikwe ka ndị na-abụghị ndị mmadụ (ọkachasị ndị na-achụ ego) metụta ụzọ ị na-aga. Ọ bụ ntụzịaka ị ga-eme nke ọma na ịnara.
Ọ bụ ezie na ọ nweghị onye ndụmọdụ anyị kwenyere na ya otú ime ya, ha nile kwenyere na anyi kwesịrị mee ya… ma mee ya ugbua. Ya mere… anyị bụ!
James Carville na Igodo 3 nke Mgbasa Ozi Ọma